मौसममा बदली : तीन प्रदेशमा वर्षाको पूर्वानुमान, कुन प्रदेशमा कस्तो ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौँ । आज पनि मौसममा बदली भएको छ । बंगाल र आसपासमा बनेको न्युन चापीय क्षेत्रको प्रभावले मौसममा बदली भएको हो ।
अहिले तराईका अधिकांश स्थानमा बाक्लो हुस्सु लागेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज मौसम कहाँ कस्तो ?
तापक्रममा हल्का गिरावट आउनुको साथै तराईका धेरै भू-भागहरुमा बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु्रकुहिरोसमेत लाग्ने भएकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आज पनि केही ठाउँमा पानी पर्ने र हिमपात हुने सम्भावना
याे पनि पढ्नुस न्यून चापीय रेखा नेपाल तर्फ बढ्दै, भारी बर्षाको सम्भावना
ट्याग्स: मौसम, वर्षाको पूर्वानुमान